Iray amin'ireo loharanom-pahalalana be mpampiasa indrindra hamoronana firaketana misy rivotra maizina na manjombona ny ranomaso sy ny rà mandriaka. Izany no antony anolorako anio ity fonosana ity izay misy maodely borosy isan-karazany ho an'ny Adobe Photoshop izay maka tahaka ny endrika ranomaso. Mazava ho azy fa raha ampiharintsika mivantana amin'ny sary na fanoharana izy ireo dia tsy hanana endrika azo itokisana izy ireo, noho izany dia nanoro hevitra ianao fa raha mitady valiny azo tanterahina bebe kokoa ianao dia manontany momba ny fomba sy ny fomba hanaovana izany (fomba fampifangaroana sy safidy dia toerana tena ilaina hapetraka. endrika mangarahara sy azo antoka) na koa andramo ny tenanao amin'ireo safidy natolotry ny Photoshop anay. Mety ho hitantsika amin'ny tutorial video manaraka io (ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa). Ireo singa izay toa tsy dia misy dikany ireo dia afaka manome fanehoana sy kalitao lehibe amin'ny famoronana sy ny asantsika mampiavaka azy. Ity dia miaraka amin'ny makiazy nomerika, firafitra tsara, ary fanamafisana ny jiro tsara dia mety hiteraka sary somary mavesatra ary tsy handratra mihitsy.
Ity fonosana manaraka ity dia tonga amin'ny endrika voafintina ary azonao atao ny misintona azy avy amin'ny mpizara 4Shared, na dia misy aza ny olana dia ampahafantaro ahy ny hevitro ary hosoloiko ilay rohy (toy ny nitranga tamin'ny fotoana hafa). Manantena aho fa mankafy azy io toa ahy ianao ary mampiasa azy amin'ny forongonao Daty Halloween na tetikasa foronina.
Teardrop Brushes Pack ho an'ny Adobe Photoshop: (http://www.4shared.com/zip/s9oOSPnpce/2010092308__1_.html)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Teardrop Brushes Pack ho an'ny Adobe Photoshop
Lazainy amiko fa tsy mety ilay rohy.
Voafafa ilay rakitra